यी हुन अपराध अनुसन्धानमा अब्बल ईन्स्पेक्टर राई ! «
यी हुन अपराध अनुसन्धानमा अब्बल ईन्स्पेक्टर राई !
प्रकाशित मिति : २६ बैशाख २०७६, बिहीबार ०९:३३
नयाँ ऐन अनुसार कसैलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाईएको पाईएमा दुरुत्साहन मुद्धा लाग्ने गरेको छ । सोही आरोप प्रमाणित भएमा पाँच बर्षसम्म जेल सजाय र ५० हजार सम्म जरिवाना हुन सक्ने प्राबधान रहेको राईले बताए । ईलाका प्रहरी कार्यलय बेलबारीमा प्रमुख भएर आएपछि राईले छोटो समयमा अपराध अनुसन्धानमा महत्वपुर्ण सफलता हात पार्न सफल मात्र भएका छैनन । जनताको भरोसाको केन्द्र समेत बन्न सफल भएका छन ।-पुर्बेलिन्युजबाट